Siyaabo Fudud oo Looga Dhigo Maalinta Dharka Dhaqan-saaxiibtinimo! - Xarunta EcoTechnology
Dhawaan, waxaan dhageystay Malcom Gladwell Podcast Warshadaha Pushkin habka ugu waara ee lagu dhaqo dharkeena. Waxay igu noqotay yaab, maxaa is saabuunta waarta ee waarta? Ku mayrista biyo qabow runtii dharkaygu ma nadiifiyaa?
Iyada oo badeecooyin aad u badan ay ku jiraan baakado siyaalo qurux badan oo cagaar iyo qaabab dabiici ah maalmahan, way adag tahay in la ogaado badeecadaha lagu aamini karo dharkayaga wasakhaysan.
Podcast -ka Malcom wuxuu ka tarjumayay maalmaha hore ee dhar -dhaqidda oo ay la socdaan looxyo dhaqid, khadadka dharka iyo saabuunyo macmal ah. Sida ugu habboon, dhammaanteen waxaan u keeni doonnaa culayskayaga webiga si aan ugu maydho saabuun dabiici ah oo aan u laallaadinno si ay u engegaan, ka dibna ku dhex milmaan dhaldhalaalka maydh-kaarboon dhexdhexaad ah. Laakiin hawlgalkan iyo ku-dhaqmidda waqti-qaadashadu ma aha mid inta badan naga dhab ah. Runta marka la sheego, aad ayaan ugu mahadnaqayaa sixirka mashiinnadayada. Rakadayda hore ee aaminka ah ayaa qoyn karta, ka saari karta wasakhda oo dharkayga ku mayrin karta dhammaan riixitaanka badhanka.
Arrimuhu waa hubaal inay fududaadeen, laakiin isticmaalka biyaha iyo tamarta ayaa isa soo taraya.
Sida laga soo xigtay Mashruuca dhaqidda dharka, Celceliska qoyska Ameerika wuxuu sameeyaa 8-10 xabo oo dhar dhaqid ah toddobaad kasta. Taasi waxay u tarjumaysaa qiyaastii 660 milyan oo xamuul ah sannad kasta, ama 1,000 xamuul ayaa ka bilaabmay ilbidhiqsi kasta Ameerika.
Waa maxay qaybta ugu karboonka badan ee dharka lagu dhaqo?
Muuqaalka muuqaalka ah, Gladwell wuxuu ku wareystay madaxa qaybta P& G ee Waqooyiga Ameerika ee cilmi baarista iyo horumarinta Daryeelka Dharka, Tod Klien, ama “guru -ga dharka dhaqda Mareykanka”. Markii la baarayo raad-raaca kaarboon ee badeecad kasta oo dharka lagu dhaqdo, Klien waxay ogaatay in “wajiga adeegsiga badeecadda”, ama caadooyinka dharka lagu dhaqo ee macaamilka, ay ka kooban tahay saddex meelood laba meelood saamaynta deegaanka. Inta badan raadkan waxay ka timaaddaa tamarta loo isticmaalo kuleylka biyaha.
Sababtoo ah alaabta ceyriinka ah, wax soo saarka iyo soo dejinta saabuunta dharka ayaa aad u yar marka la barbardhigo tamarta loo isticmaalo kuleylka biyaha, Gladwell wuxuu ku soo gabagabeeyay “saameynta deegaanka ee culeyska dharka dhaqda waxay noqoneysaa waxa annaga, dadka guriga jooga.” Taasi waa sax dadyowga, marka ay timaaddo dhar -dhaqidda, annagu awooddo samayso doorashooyin isbeddel keena.
Maxaa Qabow Loogu Hayaa?
Isticmaalka biyaha qabow waxay badbaadisaa 90% tamarta marxaladda isticmaalka (Energy Star). Waxa kale oo ay kaa caawineysaa in dharkaagu sii dheeraado oo uu yareeyo midabada dhiig baxa iyo baaba'a. Marka ma aha oo kaliya inaad keydiso tamarta, waxaad u ekaan doontaa mid aad u qurux badan markaad sameyso!
Saabuunta Ma Go'aamisaa Hufnaanta Cimilada?
Sida laga soo xigtay Klien, saabuunahu waxay adeegsadaan surfactants iyo polymers kuwaas oo gacan ka geysanaya qabashada wasakhda oo ku dhex jiida biyaha, ka dibna u adeegsada enzymes si ay u burburiyaan noocyada kala duwan ee wasakhda. Enzymes -kan waa in si gaar ah loogu diyaariyaa biyo qabow si ay waxtar ugu yeeshaan nadiifinta dharka. Dareen -celinta kiimikada ee u dhexeeya saabuunta iyo wasakhda ayaa si weyn hoos ugu dhacaya marka heerkulku hoos u dhaco, sidaas darteed injineeradu waxay soo saareen saabuun si gaar ah loogu maydho biyo qabow.
Sidaa darteed, qaacidooyinka “dabiiciga ah” ee alaabo badan oo dhaqidda cagaaran ayaa laga yaabaa inay dhab ahaan ka sii xun yihiin nadiifinta culeyskaaga biyo qabow marka loo eego kuwa caadiga ah.
Laakiin Ka warran Suds?
Waxaad aragtay saabuunada oo ku faanaya suudhka hoose, ama kuwa kale oo tusaaya goobooyin dheeraad ah baakadaha. Dooda suuddu waxay inta badan ku timaaddaa nooca makiinada dharka dhaqda ee aad haysato. Saabuunada joogtada ah waxaa loogu talagalay biyo badan, oo dhaliya xumbo saabuun ka badan qaacidooyinka waxtarka sare (HE). Badi mashiinnada dhaqidda ee wax-ku-oolka badan leh waxay leeyihiin dareemayaal dareen u leh suud dhammaadka wareegga mayridda. Haddii ay jiraan, waxay samaynaysaa biyo raacin kale, iyadoo u adeegsanaysa biyo dheeraad ah suudh badan. In kasta oo dhammaan goobooyinku ay u muuqdaan kuwo nadiif ah, suudyada yar ayaa sida caadiga ah ka fiican maxaa yeelay kuwo aad u badan ayaa dib ugu soo celin kara carrada dharkaaga kadib markaad qalajiso (Mashruuca Dhaqidda).
Haddaba, maxaan ognahay?
Sida kaliya ee saabuunta si dhab ah u waarto waa haddii ay ku shaqeeyaan biyo qabow.
Ku dhaqidda biyo qabow waa dhaqanka ugu fiican ee aad samayn karto ka dib markii aad u cusboonaysiiso qalabkaaga kuwa tamarta ku shaqeeya! Adigoo ka beddelaya hal badhan oo riix ilaa mid kale, waxaad badbaadin kartaa 90% tamartaada, yareyn kartaa raad -raacaaga kaarboonka, lacag ku keydiso biilasha korontada iyo kordhinta nolosha dharkaaga! Runtii taasi way fududahay.
Talooyin kale oo dhar -dhaqasho oo waara oo ka socda Treehugger:
Samee xamuul buuxa markasta oo ay suurtogal tahay
Mashiinnadu waxay isticmaalaan qiyaas isku mid ah oo tamar ah iyadoon loo eegayn culeyska culeyska, markaa buuxi. Tani waxay badbaadin kartaa gurigaaga 99 rodol oo qiiqa kaarboon laba ogsaydh sanad walba!
Haddii mashiinkaagu leeyahay mid, isticmaal ikhtiyaarka wareegga sare.
Haddii aad isticmaasho qalajiyaha, tani waxay yaraynaysaa xaddiga qoyaanka dharkaaga marka aad rarto, iyadoo la dhimayo waqtiga iyo tamarta loo baahan yahay si loo qalajiyo.
Dharkaaga sudho si aad u engegto, haddii ay suurtogal tahay.
Tani waxay badbaadin kartaa gurigaaga ilaa 700 rodol oo qiiqa kaarboon laba ogsaydh sannadkii, oo lagu daray $ 75 oo ah biilka adeeggaaga.
Ku cusboonaysii qalabkaaga qaabab tamar badan leh.
Ka hubi shirkaddaada tamarta tamarta waxa dib -u -dhimista loo heli karo si loo casriyeeyo qalabkaaga.
Diisambar 23rd, 2021 | 0 Comments